လူနာတင်ယာဉ်ကိုတောင် ဦးစားမပေးတဲ့ အသိတရား ခေါင်းပါးသူများ – Shwe Myanmar
Posted on March 6, 2021 by Shwe Myanmar
ဖြစ်စဉ် ၂ ရပ်လုံး ကျွန်တော်တို့ကား ပေါ်မှာ.အောက်ဆီဂျင်ပေး.ခေါ်ရတဲ့ အရမ်းအရေးကြီးလူနာ တွေ ဆေးရုံပို့ရတဲ့အချိန်..မီးစုံဖွင့် အလန်းအော်တယ်.. မောင်းတဲ့ ကလေးတွေက အသက်ကယ်ဖို့ဘဲ စိတ်ထဲထည့်ထားတယ်.. ဆေးရုံမြန်မြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့.. မီးပွိင့်မီးနီ ဖြတ်မိတယ်
ဒါပေမဲ့ ၂ ကြိမ်လုံး တဖက်ယာဉ်ကြောက ကားတွေ နဲနဲလေးမှ အခွင့်အရေးမပေးခဲ့ပါဘူး ဦးစားလဲ မပေးပါဘူး..ပုံပါအတိုင်း ဝင်တိုက်တာ ခံရပါတယ်.. ကား ၂ စီး တရက်စီ ၁၁ ရက်နေ့နဲ့ ၁၈ရက်နေ့က ပါ.. ကျွန်တော်တို့ လျော်ပေးခဲ့ရပါတယ်..ကိုယ့်ကားကိုလည်း မြင်တဲ့အတိုင်း ဘေးတံခါးတွေနဲ့
အရှေ့ခေါင်းတွေကို ပြင်ရပါတော့မယ်.. ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို မှာထားလိုက်ပါပြီ..ဘယ်လောက်အရေးကြီးကြီး.မီးနီကို မဖြတ်ပါနဲ့တော့လို့..ဒီဖြစ်စဉ် ၂ ရပ်လုံးမှာ..လူနာအသက်ကယ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေလဲ ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော်တို့ မီးနီကို မဖြတ်ရဲတော့ပါဘူး..
လူနာတငျယာဉျကိုတောငျ ဦးစားမပေးတဲ့ အသိတရား ခေါငျးပါးသူမြား
ဖွဈစဉျ ၂ ရပျလုံး ကြှနျတျောတို့ကား ပျေါမှာ.အောကျဆီဂငျြပေး.ချေါရတဲ့ အရမျးအရေးကွီးလူနာ တှေ ဆေးရုံပို့ရတဲ့အခြိနျ..မီးစုံဖှငျ့ အလနျးအျောတယျ.. မောငျးတဲ့ ကလေးတှကေ အသကျကယျဖို့ဘဲ စိတျထဲထညျ့ထားတယျ.. ဆေးရုံမွနျမွနျရောကျဖို့အရေးကွီးတယျပေါ့.. မီးပှိငျ့မီးနီ ဖွတျမိတယျ ဒါပမေဲ့ ၂ ကွိမျလုံး
တဖကျယာဉျကွောက ကားတှေ နဲနဲလေးမှ အခှငျ့အရေးမပေးခဲ့ပါဘူး ဦးစားလဲ မပေးပါဘူး..ပုံပါအတိုငျး ဝငျတိုကျတာ ခံရပါတယျ.. ကား ၂ စီး တရကျစီ ၁၁ ရကျနနေဲ့ ၁၈ရကျနကေ့ ပါ.. ကြှနျတျောတို့ လြျောပေးခဲ့ရပါတယျ..ကိုယျ့ကားကိုလညျး မွငျတဲ့အတိုငျး ဘေးတံခါးတှနေဲ့ အရှခေ့ေါငျးတှကေို ပွငျရပါတော့မယျ..
ကြှနျတျောတို့ ကလေးတှကေို မှာထားလိုကျပါပွီ..ဘယျလောကျအရေးကွီးကွီး.မီးနီကို မဖွတျပါနဲ့တော့လို့..ဒီဖွဈစဉျ ၂ ရပျလုံးမှာ..လူနာအသကျကယျရငျးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အသကျတှလေဲ ပေးဆပျလိုကျရနိုငျပါတယျ. ဟုတျကဲ့..ကြှနျတျောတို့ မီးနီကို မဖွတျရဲတော့ပါဘူး..
Previous PostPrevious မန္တလေး ဂွမ်းရုံဈေး စိန်ပန်း မီးလောင်မှု (ရုပ်သံ)
Next PostNext လမ်းပေါ်မှာဖုန်းစစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ